Local: သင်၏ WordPress ဆိုဒ်ကိုဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့်ထပ်တူပြုရန် Desktop Database တစ်ခုတည်ဆောက်ပါ Martech Zone
အကယ်၍ သင်သည် WordPress ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများစွာကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပါကအဝေးမှဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်ရန်ထက်သင်၏ local desktop သို့မဟုတ် laptop ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ရန် ပို၍ လွယ်ကူမြန်ဆန်ပြီးမြန်ဆန်ကြောင်းသင်သိသည်။ ဒေသခံဒေတာဘေ့စ်ဆာဗာတစ်ခုလည်ပတ်ခြင်းသည်ပြင်ဆင်ခြင်းကဲ့သို့အလွန်နာကျင်စေနိုင်သည် MAMP or XAMPP local web server ကိုစတင်ရန်၊ သင်၏ပရိုဂရမ်ဘာသာစကားကိုလက်ခံရန်နှင့်သင်၏ဒေတာဘေ့စ်နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
WordPress သည်архитектураရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါသည်။ PHP နှင့် MySQL ကို NGINX သို့မဟုတ် Apache Server တွင်သုံးသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ Laptop ကို web server ဗိသုကာတစ်ခုလုံးကိုလွှင့်ပစ်လိုက်ခြင်းဟာအလွန်တရာကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး web server ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမယ်၊ database server ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမယ်၊
Local: WordPress ထည့်သွင်းခြင်းတစ်ခုနှိပ်ခြင်း
Local သည် local WordPress site တစ်ခုအားစုစုပေါင်းလေပြေတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိရန်မလိုပါ။ တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသင့်ဆိုဒ်သွားရန်အဆင်သင့်ရှိသည် - SSL ပါဝင်သည်။ အင်္ဂါရပ်များစာရင်းတော်တော်လေးမယုံနိုင်စရာပါ!
ဆိုက်ဝန်ဆောင်မှုများ - မူလ၊ OS-level PHP, MYSQL၊ ဝဘ်ဆာဗာဝန်ဆောင်မှုများ။ PHP ဗားရှင်းတစ်ခုချင်းစီ၊ NGINX, Apache နှင့် MySQL သို့ပြင်ဆင်ထားသောဖိုင်များအားလုံးကိုတည်းဖြတ်ရန်အတွက်ဖွင့်ထားသည်။
ဆိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု - NGINX or Apache, PHP ဗားရှင်း (၅.၆၊ ၇.၃ နှင့် ၇.၄ နှင့် Opcache ဖြင့်) အကြား Hot-swap နှင့်ဆိုက် URL ။ PHP ဗားရှင်းတစ်ခုစီ၊ NGINX, Apache နှင့် MySQL သို့မှတ်တမ်းဖိုင်များကိုအဆင်ပြေစွာဖော်ထုတ်နိုင်သည်။
Clone ဆိုဒ်များ - ဆိုက် URL အပါအ ၀ င်ဖိုင်များ၊ ဒေတာဘေ့စ်များ၊ ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံများကိုလုံခြုံစွာ ပြောင်းလဲ၍ ပုံတူပွားနိုင်သည်။
ဒီဘာဂ် - PHP ကိုလျင်မြန်စွာ debug လုပ်လိုက်ပါ (Xdebug မှရနိုင်သည် Add-ons စာကြည့်တိုက်)
HTTPS ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း - ဆိုဒ်အသစ်များအတွက်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးလက်မှတ်ကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးပေးသည်။ Ngrok မှပေးသောအခြေခံ site tunnel များ၊ ပိုမိုမြင့်မားသော connection limit များရှိသော persistent URLs၊ stripe webhooks, PayPal IPN နှင့် Rest APIs
WordPress Multisite - subdomain နှင့် subdirectory တပ်ဆင်မှုများကိုပံ့ပိုးမှုသည် hosts file နှင့် subdomain ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ရန်တစ်ချက်နှိပ်ပါ။
Site အသေးစိတ်ပုံစံ - မည်သည့် site ကိုနောင်တွင်ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အသေးစိတ်ပုံစံအဖြစ်သိမ်းဆည်းပါ။ ဖိုင်များ၊ ဒေတာဘေ့စ်များ၊ config ဖိုင်များနှင့် Local ဆက်တင်များအားလုံးကိုပြန်ယူလိမ့်မည်။
သွင်းကုန် / ပို့ကုန် - ကွန်ရက်စာမျက်နှာဖိုင်များ၊ ဒေတာဘေ့စ်များ၊ config ဖိုင်များ၊ မှတ်တမ်းဖိုင်များနှင့်ဒေသခံဆက်တင်များပါ ၀ င်သည်။ မော်ကွန်းတိုက်များ၊ PSDs၊ .git လမ်းညွှန်များစသည့်သင်၏တင်ပို့မှုမှဖိုင်များကိုဖယ်ထုတ်ပါ။
စာပို့ - စာပို့ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းအတွက် PHP sendmail မှထွက်ရှိသောမည်သည့်အီးမေးကိုမဆိုကြားဖြတ်ရန် MailHog ပါဝင်သည် (ဤအရာသည်အော့ဖ်လိုင်းတွင်အီးမေးလ်များကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်ဟုလည်းဆိုလိုသည်) ။
SSH + WP-CLI - တစ် ဦး ချင်းဆိုဒ်များအတွက်ရိုးရိုးလေး SSH ဆက်သွယ်မှု။ WP-CLI သည်ဆိုက် SSH ကိုဖွင့်ပြီးနောက်“ wp” ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ထောက်ပံ့ - ရပ်ရွာဖိုရမ်များ၊ In-app အထောက်အပံ့နှင့်လက်မှတ်များပါ ၀ င်သည်။
Local မှ Flywheel သို့ WPEngine သို့စည်းညှိပါ
ပိုကောင်းတာတောင်မှသင်၏ local instance ကိုအချို့သောစိတ်ကူးများနှင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီးထပ်တူပြုနိုင်သည် WordPress သည် hosting ကိုစီမံသည် ဝန်ဆောင်မှုများ:
WordPress ကိုဖြန့်ကျက်ပါ - က Flywheel ထုတ်လုပ်မှု, Flywheel ဇာတ်စင်, ဒါမှမဟုတ်ရန် WP အင်ဂျင်
MagicSync - ပတ် ၀ န်းကျင်အကြားရွေ့လျားသောအခါပြောင်းလဲသွားသောဖိုင်များသာဖော်ပြလိမ့်မည်။
Local ကို download လုပ်ပါ
ထုတ်ဖော်: ကျနော်တို့ကတစ် ဦး Affiliate ပါပဲ Flywheel (ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကိုဤနေရာတွင်တည်ခင်းisည်!) နှင့် WP အင်ဂျင်.
Tags: apacheconfig ကိုဒီဂရီ wordpresswordpress ကိုဖြန့်ပါflywheelဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖိုင်များကိုမှတ်တမ်းတင်မှော်ဆရာphpwordpress ဒေသခံ runစာပို့wordpress ထပ်တူပြုပါwordpress synchWordPresswordpress အသေးစိတ်အစီအစဉ်များwordpress ကို hostingwp-cliwpengine